မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ကျွေးချင်မွေးချင်တတ်ကြသည့် ချစ်စရာ့စိတ်စေတနာသည် အကျင့်၊ ဓလေ့ထုံးစံ အဖြစ်သို့ပင် ပြောင်းလဲရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ အသိမိတ်ဆွေ တစ်ယောက် လမ်းတွေ့လျှင် လ္ဘက်ရည် ခေါ်တိုက်မည်။ တနယ်တကျေးမှ ဧည့်သည်ဆိုပါလျှင်လည်း "တို့အိမ်ဘက်လည်း ထမင်းစားလှည့်ခဲ့ပါဦး"ဟု ဖိတ်မန္တကပြုကြသည်။ ချိုင့်ဖြင့် ပို့ပေးတတ်သည်များလည်း ရှိသေးသည်။ မွေးနေ့၊ အိမ်သစ်တတ်၊ ထိမ်းမြားမင်္ဂလာ နှင့် အလှူမင်္ဂလာတို့ ဆိုလျှင်တော့ ပြောစရာမလို အကျွေးအမွေးကပါပြီးဖြစ်သည်။
တရားဓမ္မအားထုတ်နေသူများသည် သူတစ်ပါး ကျွေးမွေးလှူဒါန်းသော အာဟာရကို ပစ္စဝေက္ခဏာ ဆင်ခြင်၍သော်လည်းကောင်း၊ အလှူရှင်အား မေတ္တာပို့သ၍သော်လည်းကောင်း၊ မိမိ အားထုတ်ဆဲ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ဆက်လက်အားထုတ်လျက်သော်လည်းကောင်း၊ သုံးဆောင်မှီဝဲရသည်ဟု လေ့လာဖူးပါသည်။ ထိုသို့ မဟုတ်ဘဲ အလှူရှင်များက ချမ်းသာစွာ တရားပွားများအားထုတ်နိုင်ပါစေရန် ရည်သန်၍ လှူဒါန်းသော ဒါနကို အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ၊့ လောဘ၊ ဒေါသတို့ဖြင့် စားသုံးမိမည်ဆိုပါက အလှူ့ရှင်ထံတွင် ခန္ဓာဖြင့် ကြွေးဆပ်ရတတ်ပါသည်။ ခန္ဓာဖြင့် ဆိုသည်မှာ သူတစ်ပါး၏ စားဖတ်၊ ၀ါးဖတ် အဖြစ်သော် လည်းကောင်း၊ အခိုင်းအစေခံအဖြစ်သော်လည်းကောင်း ကြွေးဆပ်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် သံသရာတွင် မသိခြင်းအပေါင်းဖြင့် ကျင်လည်ကြသူတို့၏ မသိခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် မိမိ၏သင်္ချိုင်းသည် ကုန်းသင်္ချိုင်းလေလော၊ ရေသင်္ချိုင်းလေလော၊ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးဟု ဆိုလိုက ဆိုနိုင်သည့် ပါးစပ်သင်္ချိုင်းလေလော ဟူသောအချက်ကို သတိပြုရပေမည်။ National Geographic Channel တွင် တွေ့ရသည့် ကျားသစ်ပါးစပ်ထဲမှ ဂျီသမင်ငယ်၏ အဖြစ်ကို စိတ်မှန်းဖြင့် ခံစားကြည့်ကြစေလိုပါသည်။
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကျွေးတာကို သွား၍စားရသော အခါများတွင် “တို့ကတော့ လက်ချည်းလာတာ မဟုတ်ဘူးနော်၊ ပါးစပ်လည်းပါတယ်” ဟု စ,နောက်တတ်ကြသည်။ “သူခေါ်ကျွေးတာကို ငါက Blind ကြီးသွားစားရမှာ ရှက်စရာကြီး၊ တစ်ခုခုတော့ ၀ယ်သွားဦးမှ” ဟုလည်း တစ်ခါတစ်ရံ ခပ်ကြောင်ကြောင်တွေးမိတတ်သည်။ တရားအားထုတ် ကျင့်ကြံနေခြင်း မဟုတ်ဘဲ၊ ခင်၍မင်၍ ကျွေးခြင်းမျိုးတွင် ကျွေးသူ၊ စားသူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် မည်သို့သော စိတ်များထားကြလျှင် သင့်မြတ်ပါမည်နည်း။
အလွယ်ကူဆုံးမှာ “ကျွေးနိုင်၊ မွေးနိုင်ပါစေ” ဟု ဆန္ဒပြု ဆုတောင်းပေးခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ထိုသောအခါ ကြင်စဦးများနှင့် ကလေးမရသေးသည့် အိမ်ထောင်များဖြစ်ပါက ပြုံးတုံ့တုံ့ဖြစ်ကြပေမည်။ တချို့ကတော့… “ဟေ့ ဟေ့ ကျွေးနိုင်ပါစေ တွင်ပဲရပ်၊ မွေးတော့ မမွေးနိုင်တော့ဘူး” ဟု ရယ်မောရင်း အချိန်မှီတားဆီးတတ်ကြသည်။ “ကျွေးနိုင်ပါစေ” ဆိုရာ၌ မိမိတို့ ကောင်းကောင်းစားရရန်၊ မကြာခဏ စားရရန် မရည်ရွယ်ပါ။ ကျွေးလိုသူ၏ စေတနာကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီး၊ “မွေးနိုင်ပါစေ” ဆိုသည်မှာ မိမိ၏ ပစ္စည်းဥစ္စာများအပေါ်တွင် တပ်မက်သည့်စိတ်ကို တတ်နိုင်သမျှ စွန့်လွှတ်၍ ပြန်လည်ရရှိမည့် တစ်ဘ၀ တစ်နပ်စာအကျိုးကို မမျှော်ကိုးသည့် စိတ်ကောင်း စိတ်မြတ်များ မွေးနိုင်သမျှ မွေးနိုင်ကြပါစေဟု ဆန္ဒပြု ဆုတောင်းခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
သူတော်ကောင်းဓာတ်၊ တရားမြတ် လွှမ်းပတ်ကမ္ဘာတည်စေသောဝ်။
Blog စာမျက်နှာများတွင် ကျွေးမွေးဧည့်ခံထားသော အစားအစာများသည် ဗိုက်ထဲသို့ရောက်အောင် စားသုံးလိုက်ရသော အာဟာရများ မဟုတ်စေကာမူ၊ စဉ်းစား ဆင်ခြင် အသိဉာဏ်တိုးအောင် အာဟာရပေးပါသည်ဟု ခွန်အားရှိစွာဖြင့် ဤ Post ကိုရေးသားလိုက်ပါသည်။
(မှတ်ချက်။ ။ မသီတာ၏ အတွေးအမြင် စစ်စစ်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုဧရာ Style ၀င်နေ၍ သူမှ တွေးတတ်၊ မြင်တတ်တာ မဟုတ်ကြောင်း၊ မိမိသည်လည်း ကျွေးတတ်၊ မွေးတတ်ပါကြောင်း- S-C)
မမေအောင်မိတ်ဆက်ပေးလို့ ဒီဘလော့ကို သမီးသိခဲ့တာပါ။ လာဖတ်တိုင်း စိတ်မှာမှတ်စရာ တခုခု အမြဲတမ်း ရခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မသီတာ။ မသီတာတို့ဘလော့ကိုဖတ်ပြီး မသီတာတို့စိတ်က ငြိမ်းချမ်းတယ်နော် လို့သမီးကမမေအောင်ကိုပြောတော့ မမေအောင်က 'ညီမရေ..မသီတာကရုပ်လည်းချော၊စိတ်သဘောထားလည်းကောင်းတယ်' လို့ပြောတယ်။
ရေးတတ် သားတတ် သော မသီတာ...
တွေးတတ် မြင်တတ် မသီတာ..
မသီတာ ရေးသားထားသော Blog စာမျက်နှာများသည် စားသုံးလိုက်ရသော အစာ အာဟာရများ မဟုတ်စေကာမူ စာဖတ်သူတွေရဲ့စိတ်ကို စဉ်းစား ဆင်ခြင် အသိဉာဏ်တိုးအောင် စိတ်အာဟာရ ပေးပါသည်ဟု ထင်မြင်မိပါကြောင်း...။
ဖတ်ချင့်စဖွယ်၊ မှတ်ချင့်စဖွယ် ရေးသားတတ်ပါပေသည်။
ရွာမှာ အလျှူဆိုရင် လက်ဗလာနဲ့ သွားတာဘဲ။ နိုင်ငံခြားမှာတော့ မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်ဖြစ် အလျူဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကို ကျွေးတဲ့စရိတ်ဖိုး ငွေသားဖြစ်ဖြစ် လက်ဆောင် ဖြစ်ဖြစ် ပြန်ပေးကြတယ်။
အလျှူပေးတာကလည်း ရှိမှ ပေးနိုင်တာပေ့ါနော်။ ရေရည် ဖြစ်လာရင်.. အ၀င်မရှိဘဲ အထွက် ရှိဖို့ မလွယ်ဘူး။ ဒါကတော့ အရှေ့ နဲ့အနောက်ရဲ့ ကွာခြားချက်ပါဘဲ
ယူကေမှာတော့ စားဖို့ သွားရင် လက်ဆောင်ပါသွားတယ်
အတွေးအမြင် ဖလှယ်ပွဲသို့ ကြွရောက်လာသူ အပေါင်းကို အကျွေးအမွေးဖြင့် ဧည့်ခံခွင့်ရ၍ ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ရပါကြောင်း
“မ”ရေ… ကျွန်မကတော့ ဒီBlogလာပြီးရင် စိတ်အာဟာရပြည့်ပြည့်ပြီး ပြန်သွားတာပဲ… ငြိမ်းချမ်းမှုတွေနဲ့အမြဲတည်ခင်း ဧည့်ခံနိုင်တဲ့ အိမ်ရှင်ရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကတော့ တကယ့်ပါရမီထူးပါပဲ….
သီတာရေ... ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ ညဘက်တယောက်ထဲ လာလည်ရင်းနဲ. အကျွေးအမွေးနဲ့တိုးသွားလို့ စားသွားပါတယ်။ သီတာ့လက်ရာကို သတိရတယ်။ မှတ်မိသေးနေသေးတယ်နော်....:P
အဖြေ မလိုတဲ့ ပုစ္ဆာ
Sonata - Cantata ရဲ့ အတွေးအမြင်
တရားဦး ဓမ္မစကြာ - နိဒါန်း
မေတ္တသုတ်ပရိတ်တော် နှင့် မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏...
kkn,ktho,kka,atn တို့ကိုယ်စား တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ဒီ...